Golaha iskaashiga oo Walaac ka muujiyay Daahitaanka buuxinta kuraasta ka banaan Golaha Shacabka – STAR FM SOMALIA
Golaha iskaashiga oo Walaac ka muujiyay Daahitaanka buuxinta kuraasta ka banaan Golaha Shacabka
Golaha Iskaashiga Dowlad Goboleedyada ayaa ka hadlay buuxinta Kuraasta banaan ee Xildhibaanada Golaha Shacabka Baarlamaanka Somaliya.
War Saxaafadeed maanta ay soo saareen Golaha iskaashiga Dowlad Goboleedyada ayaa lagu muujiya walaaca ay ka qabaan daahitaanka ku yimid waqtigey eheyd in la soo dhameystiro Kuraasta ay ka dhinteen Xildhibaanada Golaha Shacabka iyo kuwa ay baneeyeen masuuliyiinta Dowladda.
Golaha ayaa muujiyay walaac ay ka qabaan hanaanka dowladda ay dooneyso iney ku buuxiso kuraasta banaan oo ay sheegeen in mudo Lix Bilood ah ay banaanyihiin kuraasta iyo go’aanka Maxkamada sare ay mar kale dib ugu sii dhigtay waqtiga la qaban lahaa doorashada lagu buuxinayo Kuraasta banaan.
Golaha Iskaashiga Dowlad Goboleedyada ayaa waxaa ku mideysan Madaxweynayaasha Maamulada; Puntland, Jubaland, Koofur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabelle.
Dowladda Somaliya ayaa shaaca ka qaaday maalmaha soo socda in dalka la keeni doono maxaabiis
Kumaandooska Danab oo sheegay Saraakiil Shabaab inay dileen